I-DBeaver: ithuluzi elihle kakhulu lokuphatha i-DB ehlukile | Kusuka kuLinux
I-DBeaver yisoftware esebenza njengethuluzi ledatha jikelele Yenzelwe onjiniyela bemininingwane nabaphathi.
I-DBeaver ine-interface yomsebenzisi eyenzelwe kahle, ipulatifomu esekwe ohlakeni lomthombo ovulekile futhi ivumela ukubhala izandiso eziningi, kanye nokuhambisana nanoma iyiphi i-database.
Futhi kufaka phakathi ukusekelwa kwamakhasimende endabuko we-MySQL ne-Oracle, ukuphathwa kwabashayeli, isihleli se-SQL, nokufomatha. I-DBeaver uhlelo lokusebenza lwesiphambano njengoba lunokusekelwa kwamapulatifomu e-MacOS, Windows neLinux.
1 Mayelana ne-DBeaver
2 Ungayifaka kanjani i-DBeaver Community kuLinux?
3 Ungayifaka kanjani i-DBeaver Community ku-Debian, Ubuntu kanye ne-derivatives?
4 Ungayifaka kanjani i-DBeaver Community ngephakeji le-RPM?
Ukusebenziseka kuyinjongo enkulu yale phrojekthi, ngakho-ke isikhombimsebenzisi sohlelo sakhiwe ngokucophelela futhi senziwa.
I-DBeaver isekela yonke imininingwane ethandwa kakhulu njenge: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQLite, Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, MS Access, Teradata, Firebird, Derby, njll.
Isekela noma iyiphi i-database enomshayeli we-JDBC. Yize empeleni, ungakhohlisa noma imuphi umthombo wangaphandle wedatha ongahle abe nomshayeli we-JDBC.
Ngaphezu kwalokho, kusekelwe kunhlaka yomthombo ovulekile futhi kuvumela ukubhalwa kwezandiso ezahlukahlukene (ama-plugins).
Kukhona isethi yama-plug-ins yolwazi oluthile (i-MySQL, i-Oracle, i-DB2, i-SQL Server, i-PostgreSQL, i-Vertica, i-Informix, i-MongoDB, i-Cassandra, i-Redis ngohlobo lwe-3.x) nezinsiza ezihlukile zokuphathwa kwedatha ( isibonelo isibonelo i-ERD).
Ezinye izinzuzo zayo nezici zalolu hlelo lokusebenza ezibalwe lapha zifaka:
Izitatimende ze-SQL / ukwenziwa kweskripthi
Ama-hyperlink aqedela ngokuzenzakalela nemethadatha kusihleli se-SQL.
Amasethi wemiphumela eskriphekayo
Ukuthunyelwa kwedatha (amatafula, imiphumela yombuzo)
Sesha izinto ze-database (amatafula, amakholomu, izingqinamba, izinqubo)
I-DBeaver isebenzisa inkumbulo encane kakhulu kunezinye izinhlelo ezidumile (SQuirreL, DBVisualizer)
Yonke imisebenzi yedatha ekude isebenza ngemodi evuliwe, ngakho-ke i-DBeaver ayishayeki uma iseva yedatha ingaphenduli noma kunenkinga yenethiwekhi ehlobene.
Ungayifaka kanjani i-DBeaver Community kuLinux?
para Abantu abanesifiso sokufaka lolu hlelo kumasistimu abo kufanele balandele imiyalo esabelana ngayo ngezansi.
Enye yezindlelas okufanele sikwazi ukufaka i-DBeaver Community kuLinux to kuhamba ngeFlatpak ngakho-ke kuyadingeka ukuthi babe nokuxhaswa kwalobu buchwepheshe obufakwe kusistimu yabo.
Uma ungenabo lobu buchwepheshe obungeziwe kusistimu yakho, Ungahlola isihloko esilandelayo.
Manje ukufaka ngale ndlela, kufanele sivule i-terminal futhi kuyo senze umyalo olandelayo:
Futhi uma ngabe sebevele balufakile lolu hlelo lokusebenza kusuka kule ndlela, bangafaka inguqulo yamanje kakhulu ngomyalo olandelayo:
Ngalokhu, bazokwazi ukuqala ukusebenzisa lolu hlelo kuzinhlelo zabo. Vele useshe isiqalisi ngaphakathi kwemenyu yakho yohlelo lokusebenza.
Uma ungayitholi, ungaqhuba uhlelo lokusebenza ngomyalo olandelayo:
Ungayifaka kanjani i-DBeaver Community ku-Debian, Ubuntu kanye ne-derivatives?
Uma bengabasebenzisi beDebian, i-Deepin OS, Ubuntu, iLinux Mint phakathi kokunye ukusatshalaliswa ngokusekelwa kwamaphakeji wedeb, bangalanda iphakethe lesicelo sohlelo lokusebenza.
Umphakathi we-DBeaver usatshalaliswa ngokwakhiwa kwama-64-bit no-32-bit, ngakho-ke kufanele ulande iphakethe elifanele lokwakhiwa kwesistimu yakho.
Okwalabo abasebenzisi bezinhlelo ezingama-64-bit, iphakethe elizolandwa yileli elilandelayo:
Ngenkathi kulabo abangabasebenzisi bezinhlelo ezingama-32-bit, iphakethe lokwakhiwa kwabo yile:
Ngemuva kokulanda iphakheji, singayifaka ngomyalo olandelayo:
Futhi ukuncika esixazulula ngakho:
Ungayifaka kanjani i-DBeaver Community ngephakeji le-RPM?
Le ndlela ifana neyedlule, isebenza kuphela ekusatshalalisweni okusekelwa amaphakheji we-RPM, afana neFedora, i-CentOS, i-RHEL, i-OpenSUSE nokunye.
Kulokhu, amaphakheji okufanele siwalande alandelayo, ama-bits angama-64:
Noma izinhlelo ezingama-32-bit:
Ekugcineni sifaka nge:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-DBeaver: ithuluzi elihle kakhulu lokuphatha ama-DB ahlukile
Ngisafuna umphathi okahle wedatha we-postgresql, ngakho-ke ake sizame!
I-Terminal Eternal: igobolondo elikude elixhuma kabusha ngokuzenzakalela